Kardemir na-ekerịta ozi ọma na a ga-emeghe ụzọ ụgbọ okporo ígwè ahụ maka ndị ọrụ onwe | RayHaber | raillynews
HomeGeneralKardemir na-akọrọ ozi ọma na ndị okporo ụzọ ga-emeghere onwe ha
29 / 04 / 2013 General, Isi akụkọ, Turkey
Akụkọ a ga-emeghere ụzọ ụgbọ okporo ígwè na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ihe ndị a na-eme n'ọhịa a emewo ka ụgbọ elu dị na Kardemir nke dị na nnukwu mmepụta ụgbọ okporo ígwè.
The projections mere maka itu ukwu na okporo ígwè mmepụta na ozi ọma, Turkey kasị ogologo ígwè na-emeputa Kardemir si mbak, nke fọrọ nke nta ka adaha. Akuku Kardemir, nke na-emewanye ngwa ngwa site na njedebe nke February, abatala 45 percent n'oge a.
State Railways nke Republic of Turkey, Turkish ụgbọ na-atụ anya incorporation nke ihe nlereanya, tinyere onwe ụlọ ọrụ nwere ike ẹkenịmde na ga-enwe ike iru na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ okporo akara na ibu na njem ụgbọ oloko. Site na iwu ọhụrụ ahụ, a na-emezi TCDD dị ka onye na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè. Enweghị mgbanwe na ọnọdụ iwu nke TCDD. Ụgwọ ahụ ga-abanye n'ike mgbe nnabata Abdullah Gül kwadoro ya.
Dịka a ga-echeta, Sabancı Holding kwupụtara mmasị ya na ụgbọ oloko dị elu, karịsịa na obodo ukwu. Mụbara investments na oru anya Turkey nanị okporo ígwè emeputa enwetela nnukwu ịrị elu na okwu nke olu Kardemir si mbak.
Kardemir, nke dị na 1.48 TL kemgbe February, mụbara 2.13 TL dịka nke taa.
Dị ka atụmanya maka ụgbọ okporo ígwè si bịa, e nwere mmepe a na-enwetụbeghị ụdị ya. Ihe dị iche n'agbata ndị nyocha '12 na-atụ anya ụgwọ ahịa kwa ọnwa na ngwaahịa ahịa nke ugbu a abanyewo na ọkwa ọkwa akụkọ. Ọnụ ọgụgụ 12 kwa ọnwa na-atụle ndị nyocha na-akọ na Kardemir dị n'ogo nke 1.82 lira.
Ọnụahịa nke ngwaahịa a taa na oghere aka na 2.14 pound. N'ime oge mgbe ọdịiche ahụ sara mbara, ma a ga-atụ anya ego ọnụahịa ahụ ịlaghachi n'ogo nke ndị ọkachamara na-atụ anya ya ma ọ bụ ndị na-eme nnyocha ga-atụle ego ha na-akwụ ụgwọ maka ụgwọ dị ugbu a.
Ndị nyocha 'Ogwe osisi' na-egosi 'AL' nwere ike ikwu, ebe agbaji kọfị 'TUT' dị ka nke abụọ n'ime aro.
N'ime nnyocha a, Ak Investment kwuru na ha na-eche na mpaghara ndị ọzọ ga-enwe ego ma mee ka okporo ígwè dịkwuo ka iwu a na Kardemir bụ nanị onye na-emepụta ụgbọ okporo ígwè na mba ahụ na-enye ndụmọdụ na ndepụta maka Kardemir.
HSBC kwuru mgbe a nwere ike na-aghọta ka a nti mmepe maka Turkey si Kardemir monorail emeputa, Kardemir D iche price ka S $ 1.85 'index on Laghachi' ọ dụrụ.
Tera Menkul Degerler kwadoro ụgwọ maka Kardemir D site na 2TL ruo 2.42 TL ma nọgide na-akwado ya dịka 'BUY'.
Ntule ndi nyocha maka uzo 2013 nke kardemir di na 24 penny.
Tupu akwụkwọ nhazi, atụmatụ 1 nke ọ bụla n'ime afọ iri na ise maka ụlọ ọrụ ahụ guzoro na TL 46 nde. Dị ka atụmatụ ndị ahịa si kwuo, atụmatụ ọnụ ọgụgụ maka uru a bụ 44,7 nde TL, atụmatụ kachasị elu bụ 61,4 nde TL ma atụmatụ kachasị elu bụ 30 nde TL. Ngwunye netwọk nke Ụlọọrụ 2012 na 1 bụ TL 75,1 nde.
Isi: m www.bursadabugun.co
A na-arụ ọrụ maka oghere okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè na mpaghara ndị ọzọ
Ụzọ okporo ụzọ na-emeghe ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ
Ịmebanye ụzọ nke okporo ụzọ na-agba ume maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ
Oghere gbara ọchịchịrị maka TCDD Nyefee okporo ụzọ okporo ụzọ na ngalaba nke onwe
Umu okporo uzo nwere ike ijikwa uzo di iche iche
Imepe okporo uzo ugboigwe na ngalaba nkeonwe | Anya nke iswa dị na anụ ahụ TTD nke YHT
A ga-ebufe okporo ụzọ okporo ụzọ na mpaghara ndị ọzọ
Topbas kwuru na a ga-esi na Etiler gaa Altnizade
3. ezumike na ụlọ ahịa na-aga n'okporo ụzọ ụzọ ụgbọ mmiri
Van Governorate, Chemical Paths on the Railway Route Na-ekwu na a ga-eme.
TCDD Erzurum Garage Manager Ahmet Basar, Logistic Village obodo kọrọ.
onye na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè
Ngwá Ọrụ Nkụzi Dị Elu
3. ụkwụ nke mmiri dị njikere
Turkey About liberalization nke Railway Transport na Post-Nkuchi Act 2023-2050 Transportation Vision-New Ụzọ na New Ohere Nzukọ ọmụmụ
TCDD Junction Line Project Mkpebi ebe a ga-ewunye eriri ahịrị na…
Nzuko maka Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Alanya-Antalya Railway Project…
Nrịgo mgbago nke Sefaköy Metrobus Gafee bụghị Emecha
TCDD Transportation Inc. Kwuputa mmezi na System EYBIS
Nke a bụ ebe a na-agba nkume! Nkụzi Ọdịdị Dị Elu